Ukubuka Okumangalisayo Okuyimfihlo Kwangasese Kwe-W/Amanzi Nokufinyelela
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Tim & Lynn
Ufuna indawo ekahle ongajabulela i-Oregon Coast? I-“Crown Bay Hideaway” yethu iyindlu yokulala entsha, elungiswe ngokuphelele engu-2 etholakala e-Coos Bay imizuzu embalwa ukusuka e-Charleston Harbour kodwa eqhelelene namahektha amabili anokubukwa okuhle kwamanzi nokufinyelela esikhumulweni semikhumbi sakho sangasese e-Charleston Harbour kanye ne-South Slough. Qasha ama-Paddleboards noma ama-kayak, ulethe inkalankala entsha ekhaya nezilwane zasolwandle bese ukosa ukudla kwakho okuthandayo, ujabulele izindawo eziningi zokucisha umlilo nezindawo zokuqoqa, noma ugoqe futhi ujabulele imuvi.
Kulula ukukuthola ku-Cape Arago Highway kodwa sihlale phezulu esiqongweni ngemva kwe-Crown Point Bridge ngemibono ye-slough kanye ne-stuary ngokufinyelela kwethu ogwini. Indlu iyimfihlo futhi ingasese kodwa sinesevisi ephelele yomakhalekhukhwini, i-WIFI esheshayo kanye nokufinyelela kwekhompyutha. Ikhaya lethu lifakwe i-Nest Thermostat, kanye ne-Samsung Smart TV ene-Netflix, i-YouTube TV ne-Amazon Prime.
4.96(216 okushiwo abanye)
4.96 · 216 okushiwo abanye
Ikotishi liyi-Oregon Coast Hideaway e-Estuary. Ibekwe ngenhla kwama-cove angasese kanye nogu lokuhambahamba, iyisilungiselelo esihle sobuciko sokupenda nokuthatha izithombe. Hamba uyodoba, ugwaze, kanye ne-kayaking kusukela ekuqalisweni komuntu siqu.
Ibungazwe ngu-Tim & Lynn
Yize singahlali esizeni, usokhaya wethu we-concierge u-Rhonda uvame ukutholakala ngesaziso sesikhashana. Siphinde sisebenzisa i-Yale Smartlock ukuze ufinyeleleke kalula futhi ikhaya lizolungiselelwa ukuzihlola wena ngokwakho ngaphambi kokufika kwakho. Uzothola imiyalelo yokufinyelela lapho ubhukha futhi sihlala singekho.
Yize singahlali esizeni, usokhaya wethu we-concierge u-Rhonda uvame ukutholakala ngesaziso sesikhashana. Siphinde sisebenzisa i-Yale Smartlock ukuze ufinyeleleke kalula futhi ikhay…
UTim & Lynn Ungumbungazi ovelele